Hevitra MPANOHARIANA | Aprily 2008
Atao inona io tabilaom-pifidianana io?
2008-04-18 @ 15:53 in Politika
Misy fotoana mivezivezy amin'iny faritra Ankadikely Ilafy iny aho. Manaraka ny arabe aloha no aleha. Rehefa mandalo ny lapan'ny tanàna na biraon'ny kaominina angaha dia mahita tabilaom-pifidianana misy sarina kandidà saingy efa mihitsankitsana avokoa ny afisy eo aminy ka tsy hita tsara ny sary. Talohan'ity fifidianana ho loholona ity anefa tsy mba tsikaritro mihitsy ny fisian'izy io. Lasa avy hatrany ny eritreritro: Mihevitra izany ny olona ato fa misy mpifidy vaventy mandalo mandrakariva amin'io faritra io matoa napetraka teo io tabilaom-pifidianana io. Natokana ho an'olona firy moa izy io sa ilaina ampahafantarina ny olon-drehetra satria fifidianana io na dia tsy fidian'ny be sy ny maro aza?
Ny fampielezan-kevitra mandeha amin'ny tele aza efa gohina na tiana na tsy tiana fa dia toa mahatsikaiky ihany ilay tabilaom-pifidianana heveriko fa diso toerana. Ny fampisehoana tsy azo atao amin'io alahady io ihany no hanamarika amin'ny olona fa hay ve misy izany fifidianana izany. Efa ela aho no te-hanoratra ity fa tsy maintsy androany satria karazan'ny andro farany amin'ny fampielezan-kevitra manko.